Euro 2016 : lalao sarotra ny an’i Belzika sy Pays de Galles | NewsMada
Euro 2016 : lalao sarotra ny an’i Belzika sy Pays de Galles
Par Taratra sur 01/07/2016
Ho fantatra anio, ny ekipa faharoa, hiatrika ny lalao manasa-dalana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa (Euro 2016), taranja baolina kitra. Hiady izany toerana izany, i Belzika sy Pays de Galles.
Hifampitana, ao amin’ny kianja Stade Mauroy, Lille, amin’ity andron’ny zoma ity ny Belza sy ry zareo Galoà, eo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny “Euro 2016”. Ekipa roa diso mifankahalala tsara satria fanindiminy amin’izao izy ireo no hifanehatra. Lalao sarotra satria mitovy tanteraka ny fahombiazana eo amin’ny roa tonta. Indroa nanao ady sahala, 1 noho 1, ny 15 oktobra 2013, nandritra ny fifanintsanana hiadiana ny tompondaka eran-tany 2014. Ady sahala samy tsy nisy nitoko kosa ny 16 novambra 2014, teo amin’ny fifanintsanana ho an’ny Euro 2016.
Raha tsiahivina kosa ny nahazoan’ny ekipa tsirairay fandresena dia lavon’i Belzika, tao amin’ny kianjany, tamin’ny isa 2 noho 0 ny Galoà, ny 7 septambra 2012. Ny 12 jona 2015 kosa lavon’i Pays de Galles, tamin’ny isa tokana 1 noho 0, ry zareo Belza.
Marihina fa iray vondrona ny Galoà sy ny Belza teo amin’ny fifanintsanana ho an’ity Euro 2016 ity. Ady sahala samy tsy nisy nitoko tany Bruxelles, Renivohitr’i Belzika ary lavon-dry zareo Belza, tamin’ny isa tokana 1 noho 0 kosa, teo amin’ny lalao miverina natao tany Cardiff.